10 zvinhu zvekufunga nezvekusarudza plasma yekucheka muchina
ARC Welding muchina
TIG Welding muchina
MIG Welding muchina
Cheka plasma cutter
Kunyudzwa ARC Welding muchina
Plasma yekucheka muchinandiyo imwe yenzira dzakanakisa dzekucheka simbi, simbi isina chinhu, ndarira nealuminium. Unogona kucheka simbi nekukurumidza uye nemazvo nekuti inopisa kuburikidza nesimbi yeplasma. Mukusarudza chaiyo plasma yekucheka muchina, isu takanyora gwara kuzvinhu gumi. Kana iwe uchifarira kutenga jira simbi kutemwa, tarisa iyo online simbi chitoro. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve plasma yekucheka muchina, ndapota tarisa iyo plasma yekucheka muchina mutengi mutungamiriri.
1. Mhepo compressor
Plasma yekucheka muchina inoda kumanikidzwa mweya kuburitsa plasma, iyo inogona kupihwa neyakavakirwa-mukati mhepo compressor kana yekunze yakamanikidzwa mweya inopa. Ese ari maviri marudzi anoshanda nemazvo, asi kana uchisarudza anocheka plasma, iwe unofanirwa kusarudza kuti ndeipi yakakunakira iwe. Iyo yakavakirwa-mukati mhepo compressor inodhura, asi izvo zvinoreva kuti iwe unogona kubata rimwe diki basa nekukurumidza.
Paunenge uchisarudza plasma yekucheka muchina, muchina waunoda ndewe mhando yepamusoro uye unomira nemuedzo wenguva. Plasma yekucheka michina haina kudhura, saka ita shuwa kuti chaunotenga chinogara uye hachiputsike kana iwe uchiita chakakosha. Sarudza kubva kune vakavimbika vatengesi. Hypertherm, Miller, Lincoln uye ESAB zvese zviripo kuBaker gasi chiteshi
3. Ndeyekuyera arc
Mutyairi wendege chinhu chekucheka chinopa arc yakagadzikana ine hupenyu hwakareba, nekuti unogona kutema simbi isina tip yetochi yetangi yesimbi. Izvi zvinobatsira kana iwe ukacheka basa rine ngura nekuti haufanire kuchenesa simbi uye nekuirova. Ichi chinyowani chitsva, zvisinei, mazhinji michina yekucheka plasma ine chinhu ichi, kunze kwemhando dzakachipa kwazvo.
Pane matatu matatu akasiyana voltage sarudzo, plasma yekucheka muchinainogona kutengwa. Unogona kutenga chero 115V, 230V kana maviri emagetsi maturusi. Iyo 115V plasma yekucheka muchina inobatsira kune vanotanga vasingade simba rakawanda uye kucheka kumba. Aya anovhara muhomwe yako yekumba, asi havana simba rakakura kudaro. Kana iwe uine 230V yekuisa, saka iwe unoda jenareta kuti umhanye nayo. Kana iwe uine imwe ine sarudzo mbiri, unogona kushandura mapulagi zviri nyore zvichienderana nehuwandu hwesimba raunoda uye nharaunda yako.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvekufunga nezvehukuru hwesimbi iyo inogona kutemwa nemucheki weplasma. Funga nezve ukobvu hwesimbi yaungade kucheka, wobva wasarudza muchina unokwanisa kucheka. Kana iwe uine inishuwarenzi, zvakanakisa kunyorera chiyero chepamusoro, kungangoitika
Pane matatu akasiyana ekudzora ekufunga nezvawo:
Rated kucheka chinzvimbo: inogona kutema 10 inch (IPM) simbi ukobvu paminiti.
Kucheka kwemhando yepamusoro: ukobvu pazasi kumhanya - ichi chichava chakakora simbi.
Inogona kuderedzwa kusvika pakakwirira. Ichave inononoka uye inogona kunge isingave yakachena kwazvo yakatemwa.
6. Kutenderera kwebasa
Duty kutenderera inoreva huwandu hwekushandisa iyo plasma yekucheka muchina inogona kutakura ichienderera. Yakakwira basa kutenderera kweplasma yekucheka muchina inogona kushandiswa kwenguva yakareba, iro basa kutenderera chero muchina unoderedzwa pamwe nekuwedzera kwemagetsi. Tsvaga iyo yepamusoro muzana pane chero yakapihwa amperage kuti uwane yakanakisa basa kutenderera.
Plasma yekucheka michina inogona kuyera kubva pamapaundi makumi maviri kusvika pamapaundi zana uye inoshandiswa kumakiniki emaindasitiri michina. Kana iwe uchida kutora yako plasma cutter kubva kubasa kuenda kubasa, iwe uchazoda chimwe chinhu iwe chaunogona kutakura pasina kutora yako kumashure! Asi rangarira, michina yakareruka haigone kutema simbi yakakora seyakakura, inorema plasma cutter.
8. Deredza hunhu
Kucheka mhando kunoreva kuchena uye kutsetseka kweakapedza chigadzirwa kucheka. Muchina wakanakisa wekucheka plasma une yakakwira yekucheka mhando, saka iyo yekucheka ichaonekwa yakapinza uye yakachena, uye haufanire kushandisa nguva kuichenesa kuti ive nechitarisiko chakatsetseka.
9. Mari yekushandisa
Iyo yekushandisa mwero weplasma yekucheka muchina unosiyana zvakanyanya pakati pemakina akasiyana uye zvinoshandiswa. Dzidza mashandisirwo emuchina wako kuchengetedza mari nekufamba kwenguva. Ultra inopisa plasma yekucheka michina inodhura, asi ine yakaderera mashandiro emutengo, uye nekuda kweyavo akanakisa ekushandisa, ivo vanogona kukuchengetedza iwe mari mukureba-kwenguva kushanda.
10. Kucheka tochi
Kureba kwemoto kwakakosha kufunga. Kana iwe ukashanda mumusangano mukuru une michina inorema, iwe uchazoda torch yakareba kuti ugone kushanda munzvimbo dzakasiyana usingafambise rinorema plasma cutter. Kana iwe uchizocheka kwenguva yakareba, tsvaga tochi inokodzera ruoko rwako chimiro kubatsira kudzivirira kurwadziwa.
Andeli Boka Co, Ltd.
© Copyright -2020 - 2022 Rutsigiro rwehunyanzvi: